Kulan lagu qasbaayo Baarlamaanka Somalia oo Muqdisho ka dhacaya – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 May 17 Kulan lagu qasbaayo Baarlamaanka Somalia oo Muqdisho ka dhacaya
Kulan lagu qasbaayo Baarlamaanka Somalia oo Muqdisho ka dhacaya
Muqdisho, May 17, 2016: Wararka na soo gaarayo oo lagu kalsoon yahay, ayaa waxa ay sheegayaan in maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan Villa Hargeysa ay ku kulmi doonaan Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo xubo ka socda beesha Caalamka.
Shirkaan ayaa waxa uu yahay mid lagu qasbaayo Baarlamaanka isla markaana lagu doonaayo in ay si qasab ku ansixiyaan heshiiskii doorashooyinka dalka oo ay gaareen Madaxda DF Somalia iyo Maamul Goboleedyada.
Baarlamaanka ayaa mar dhow gudi u saaray, dib u soo eegista heshiiskaasi ka hor inta an la ansixin,waxaana la sheegay in qodobo badan laga badalay,taasina ay keentay in beesha caalamka ay soo fara galiso.
Kulankan waxaa goobjoog ahaan doono xubno ka socda QM,Midowga Yurub,Itoobiya iyo Urur Goboleedka Itoobiya waxaana la sheegay in xubnahaan aysan dalka ka bixi doonin illaa Baarlamaanka uu ansixinaayo qorshahaan waqt kastaba ha qaadatee.
DAAWO: Doodii Baarlamaanka ee Miisaaniyadda 2017 July 18, 2017
La Taliyaha dhanka Arrimaha Dhaqaalaha Madaxweynaha oo la magacaabay May 28, 2017
Jaamacada Carlton ayaa marti-qaaday Gabadhii ka dambaysay hashtaga#CadaanStudies October 9, 2015
“Ra’iisul Wasaaraha waxaa ka sugeynaa 26 bishan inuu keeno qaabkii doorashada lagu geli lahaa” April 23, 2016
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhambaal ka helay hoggaamiyaha Uganda July 10, 2016
Danjire Michael Keating oo Kismaayo kula kulmay Axmad Madoobe February 12, 2017
Sawiro:- Marwada kowaad ee dalka oo booqatay qaar ka mid ah Isbitaalada Muqdisho October 17, 2017
Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay inay baarayso falkii AMISOM ay ku dishay dad rayid ah April 19, 2016
Galmudug iyo Ahlusuna Oo heshiis hordhac Ku gaaray dalka jabuuti. December 1, 2017
Warsaxafadeed Doorashada Galmudug March 20, 2017
Wararkii ugu dambeeyay xaalada Jowhar October 15, 2016